वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति, विपद्बाट कुन वर्ष, कति क्षति ? - kageshworikhabar.com
वर्षेनी बढ्दो प्राकृतिक विपत्ति, विपद्बाट कुन वर्ष, कति क्षति ?
१७ श्रावण, काठमाण्डौ। पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विसं २०७२ सम्म विपद्का दुई हजारभन्दा कम घटना भएका थिए । विसं २०७३ पछि विपद्का घटना क्रमशः दुई हजारबाट उकालो लागेकामा पछिल्ला केही वर्ष (विसं २०७५–२०७७) मा भने चार हजार बढी प्राकृतिक विपत्ति निम्तिए ।
Previous articleचोरिएको मोटरसाइकलसहित तीन जना पक्राउ
Next articleकर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा तीन जना बेपत्ता, एकको मृत्यु